पोखराका सेक्स प्वाइन्ट
नेपालको प्रमुख र लोकप्रिय पर्यटकीय गन्तव्य हो, पोखरा। आन्तरिक तथा बाह्य दुवै पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सक्ने प्राकृतिक सुन्दरता तथा भौतिक पूर्वाधारले भरिपूर्ण पोखरामा ‘सेक्स टुरिजम’ विकास गर्नुपर्ने बहस बेला–बेला उठ्ने गर्छ। केही वर्षअघि तत्कालीन पर्यटनमन्त्री शरदसिंह भण्डारी पोखरामा ‘सेक्स टुरिजम’ पनि थपिनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका कारण विवादमा परेका थिए।
पोखरामा लामो समयदेखि पर्यटन व्यवसाय गर्दै आएका केही व्यवसायी पनि ‘सेक्स टुरिजम’ हुनुपर्ने विषयमा कुरा गर्छन्। पछिल्लो समय प्रदेश नं. ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पोखरामा ‘रेड लाइट एरिया’ हुनुपर्छ वा पर्दैन भन्ने विषयमा बहस गर्न सकिन्छ भनेपछि ‘सेक्स टुरिजम’ का पक्ष-विपक्षमा फेरि बहस सुरु भएको छ। पोखराको प्राकृतिक सुन्दरता तथा सांस्कृतिक पक्षलाई उजागर गरेर पर्यटन व्यवसाय फैलाउनुपर्ने तर्क गर्नेहरूले ‘सेक्स टुरिजम’ को अवधारणालाई चर्को विरोध गरिरहेका छन्। कानुनी रूपमा नेपालमा यौन व्यापार वर्जित छ।
नेपाली छोरी÷चेलीको शरीर बेचेर पर्यटनमा उधुम होला र देशले विकासको फड्को मार्ला भनेर सोच्नु नै गलत भएको तर्क गर्नेहरू थुप्रै छन् पोखरामा। तर, कानुनले वर्जित गरे पनि राजधानीलगायत देशका मुख्य शहर तथा राजमार्गमा सेक्सको किनबेच भने निर्बाध रूपमा चलिरहेकै छ।
जेठ ८ गते, बुधबार, अपराह्न ३ बजे
पोखरा एयरपोर्टबाट पृथ्वीचोकतिर जाँदा नागढुंगा भन्ने ठाउँ पार गर्दै जानुपर्छ। नागढुंगामा थोरै उकालो छ। यहाँका केही रेस्टुरेन्टमा यौनधन्दा सञ्चालन हुन्छ भन्ने जानकारीका आधारमा हामीले बुधबार यहाँ ‘रेकी’ गरेका थियौँ। रेस्टुरेन्टभन्दा ठीक पारिपट्टि उभिएर करिब एक घण्टा निगरानी गर्दा दुई वटा रेस्टुरेन्टमा पुरुषहरूको आवतजावत बाक्लो देखियो।
भित्र पस्ने र बाहिर निस्कने अवधि छिटो÷छिटो थियो। खानपिनका लागि आएको हो भने त पक्कै पनि केही समय बिताउनुपर्ने हो। तर, भित्र पसेका पुरुषहरू बढीमा १० देखि १५ मिनेटमा बाहिर निस्किएको देखेपछि हामीले नागढुंगाका दुई वटा रेस्टुरेन्टमा निगरानी गर्ने निधो गर्‍यौँ।
जेठ ९ गते, बिहीबार, बिहान ९ बजे
न्यू रेस्टुरेन्ट, नागढुंगा
पोखरा एयरपोर्टबाट पृथ्वीचोकतिर जाँदा नागढुंगाको उकालो पार गरेपछि बायाँतिर छ, यो रेस्टुरेन्ट। दुईतले घरमा एउटा सटरमा देव फ्रेस हाउस लेखिएको मासुपसल छ। एकातिर होटल र अर्कोतिर न्यू रेस्टुरेन्ट लेखिएको बीचमा ढोका छ। ढोकाबाहिर खानाका परिकारका नाम लेखिएका छन् (हे. तस्बिर नं. १)। हामी निगरानीका लागि न्यू रेस्टुरेन्टभित्र छिर्‍यौँ। निकै फराकिलो स्पेस भएको यो रेस्टुरेन्टमा एकातिर काउन्टर थियो भने दायाँबायाँ टेबुल–कुर्सी राखिएका थिए। एक र अर्को टेबुलको बीचमा पर्दा हालेर एकअर्कालाई झ्वाट्टै नदेख्ने बनाइएको थियो।
रेस्टुरेन्टमा दुई युवती मोबाइल चलाएर बसिरहेका थिए। हामीले चिया÷खाजा के खान पाइन्छ भनेर सोध्यौँ। दुईमध्ये एक युवतीले ‘यहाँ चियाखाजा त केही छैन’ भनिन्। कोल्ड ड्रिंक्स, जुस, बियर मात्रै पाइने जानकारी गराइन्। ‘बिहानको ९ मात्रै बजेको छ। केको बियर खानु? हामी त खाजा खान पाइन्छ कि भनेर आएको?’ हामीले भन्यौँ। ‘खाजा त छैन, जुस खानुस्,’ ती युवतीले भनिन्।
हामीले दुई वटा रियल जुस र एक बोतल पानी माग्यौँ। त्यति नै बेला एक युवती रातोपिरो हुँदै आइपुगिन्। हामीलाई जुस र पानी दिने युवतीले माथि रहेकी साथीलाई तल पुलिस आएको भनेर अत्याएर आएकी रहेछिन्। हामीलाई देखेर पुलिस होइन भन्ने लागेपछि लामो सास फेरिन् र साथीलाई गाली गरिन्। ‘हेर् न ! अर्कोपल्ट तँलाई पनि यसै गरी सातो लिन्छु,’ उनले आफ्नी साथीलाई भनिन्।
‘किन तपाईंहरू डराउनुभएको? यहाँ के गर्न आउँछन् र पुलिस?’ हामीले प्रश्न गर्‍यौँ। ‘आउँछन् नि बेला–बेलामा हामीलाई पक्रन’ युवतीले भनिन्। ‘किन पक्रनु नि? रेस्टुरेन्टमा काम गर्नेलाई?’ हामीले केही थाहा नपाएजसरी प्रश्न गर्‍यौँ। ‘तपाईंहरू यहाँ पहिला आउनुभएको थिएन र?’ एक युवतीले उल्टै प्रश्न तेस्र्याइन्। हामी दुईमध्ये एक जनाले पहिला पनि धेरै पटक आइसकेको बताएपछि ‘त्यसो भए त थाहा होला नि ! यहाँ विशेष काम हुन्छ’ भनेर ती युवतीले हामीलाई रेस्टुरेन्टमा हुने हर्कतबारे बुझाउन खोजिरहेकी थिइन्। हामी दुईमध्ये एक जनाले चिरपरिचितजस्तै व्यवहार गरेपछि दुई जना युवती चुरोट सल्काउँदै नजिकै कुर्सीमा बसेर ‘बियर खाऊँ न’ भन्न थाले। हामीले ‘बियर त हामी खाँदैनौँ, जुस खाने भए खानुस्’ भनेपछि तीनै जनाले जुस खान थाले।
‘बिहानै आउनुभएको छ। बोहनी नबिर्गानुस् है’ भन्दै युवतीहरू जुस र चुरोट खान थाले। त्यति नै बेला उनीहरूले ‘आमा’ भनेर सम्बोधन गर्ने एक जना महिला कोठाभित्रबाट बाहिर आइन्। उनी नै यो रेस्टुरेन्टकी सञ्चालक रहेको उनीहरूले बताए। घरबाट भागेर आएको बताउँदै एक युवती ‘आमा’ रेस्टुरेन्ट सञ्चालिकाले आफूलाई धेरै सुधारेको बताउँदै थिइन्। आमाबुबा नै वैदेशिक रोजगारीमा गएको र घरमा दाइ र आफू मात्रै भएको बताउने ती युवती आमाले ‘काम’ दिएपछि आफूलाई ढुक्क भएको बताउँदै थिइन्।
‘खाजा, खाना केही पनि नपाइने ठाउँमा चार÷चार जना स्टाफ किन चाहियो नि?’ हामीले भन्यौँ।
‘दाइहरू कति ल्याङ हानिरा’को। थाहा पाएर पनि थाहा नपाएजस्तो। हाम्रो काम नै अर्को हो। कति बेला हामी चारै जना व्यस्त हुन्छौँ। अहिलेलाई दुई जना व्यस्त हुनुपर्ला। तपाईंहरू दुई जना मात्रै आउनुभएको छ।’
उनीहरूले सीधा–सीधा सेक्स प्रस्ताव गरिसकेका थिए। हामी केही समय अलमल गर्ने र कुराकानी गरेर फुत्किने योजनामा थियौँ। उनीहरू ‘माथि जाऔँ’ भनिरहेका थिए। ‘हामीले यहाँ त नबस्ने डर हुन्छ’ भन्यौँ। उनीहरूले ‘यो रेस्टुरेन्ट सञ्चालकको गेस्टहाउस पनि छ त्यहाँ जाऔँ’ भने। दुई हजारमा सबै काम फत्ते हुने भन्दै युवतीहरू बिहानको बोहनी राम्रो बनाउन लागिपरेका थिए। हामीले रेस्टुरेन्टभन्दा माथिको सेटअप हेर्नका लागि ‘माथि हेरुँ अनि मात्र बसुँला’ भन्यौँ। एक जनाले हामीलाई माथि लगिन्। चार वटा चिटिक्क परेका कोठा थिए। ‘यहीँ हो बस्ने, डर मान्नुपर्दैन’ भन्दै युवती हामीलाई मनाउने प्रयास गरिरहेकी थिइन्। हामीले अरू दुई जना साथी पनि रहेको र उनीहरूलाई लिएर आउने भन्दै बाहिर निस्कन खोज्यौँ। चारमध्ये एक युवतीले ढोकामा उभिएर बाहिर निस्कन दिइनन्। ‘दुई बोतल बियर किनेर दिनुस् अनि मात्र बाहिर जान पाइन्छ’ भन्दै ढोकामा उभिएर बाटो छेकिन्। उनले भनेजस्तै दुई बोतल बियर किनिदिएर त्यहाँबाट हामी उम्कियौँ।
जेठ ९ गते, बिहीबार, बिहान १० बजे
निर्भाना रेस्टुरेन्ट, नागढुंगा
निर्भाना र न्यू रेस्टुरेन्ट बीचमा कबाडी संकलन केन्द्र छ। निर्भाना, न्यू रेस्टुरेन्टबाट पोखरा एयरपोर्टतिर छ। एकतले यो घरको छतमा पिल्लर ठडिएका छन्। युनिक होटल एन्ड थकाली किचेनसँग जोडिएको छ (हे. तस्बिर नं. २)। बिहानको १० बजे यो रेस्टुरेन्ट छिर्दा यहाँको माहोल मदिरामय थियो। दुई वटा टेबुलमा एक÷एक जोडी बियर खाएर बसिरहेका थिए। यो रेस्टुरेन्ट पनि फराकिलो नै थियो। भित्रको सेटअप पनि आकर्षक देखिन्थ्यो। हामीले खानाका परिकार हेर्नका लागि मेनु माग्यौँ। तर, त्यहाँ रहेकी युवतीले ‘केको मेनु चाहियो र? बियर, हार्ड ड्रिंक्स के खाने भन्नुस् न’ भनिन्।
‘हामी त खाजा खान पाइन्छ कि भनेर आएको,’ हामीले भन्यौँ।
‘यस्तो ठाउँमा पनि भोकै आउने हो त? यहाँ त शक्तिशाली भएर आउने र शिथिल भएर जाने हो,’ ती युवतीले जिस्किँदै भनिन्।
अन्दाजी तीन वर्षको बच्चा लिएर एक युवती अधबैँसे पुरुषसँग बसेर बियर पिउँदै थिइन्। काखमा छोरो च्यापेर चुरोटको धुँवा उडाउँदै बियर पिउँदै गरेकी ती युवतीले दूध खुवाउनुपर्ने बच्चालाई बियरको घुट्को लगाइदिइन्। बच्चालाई बियर खुवाएको देखेपछि हामीले ‘किन बहिनी, यति सानो बच्चालाई बियर खुवाएको?’ भन्यौँ। बियरले मातेकी उनी ‘तिमीहरूलाई के मतलब? मेरो बच्चा हो। म जे खान्छु, त्यही खुवाउने हो’ भन्दै कराउन थालिन्। बच्चा काखमा लिएर ग्राहकसँग बसेर बियर खाइरहेकी ती युवतीलाई हामीले ‘यो बच्चाको बाउ होलान् नि?’ भनेर सोध्यौँ।
उनले जंगिँदै ‘छैन बाउसाउ, तिमीहरू बाउ बन्ने भए बन, होइन भने नकराओ’ भन्दै हामीलाई हपारिन्। हामीसँग टेबुलमा बसिरहेकी अर्की युवती हामीलाई ‘उसको बच्चा हो जेसुकै गरोस्, हामी हाम्रो काम गरुँ न’ भनिरहेकी थिइन्। हामीसँग दुई जना युवती दिए। उनीहरूलाई एक÷एक बोतल बियर किनिदिएर हामी केही बेर गफ गर्न थाल्यौँ। उनीहरूले बियर खाँदै गर्दा निर्भानामा हुने यौनधन्दाको बारेमा बताए। भित्रपट्टि सुरक्षित कोठा रहेको र एक पटक यौन सम्पर्क राखेको दुई हजार लिने गरेको जानकारी दिए। दुई हजारमा रेस्टुरेन्ट सञ्चालकले आधा लिने गरेको जानकारी उनीहरूले दिए। बिहान १० बज्दा नबज्दै निर्भानामा पनि चार जना युवती कामका लागि आइसकेका थिए।
जेठ १० गते, शुक्रबार
ए वान रेस्टुरेन्ट, शान्तिनगर
उनीहरूले कत्ति पनि ढिला नगरी ए वानमा उपलब्ध सेवाबारे हामीलाई जानकारी दिए– यहाँ रेड बुल हालेर बियर खाने हो र मस्ती गरेर जाने हो। ‘तपाईंहरू पहिला पनि आएकाले मात्रै ढोका खोलेको हो’ भन्दै उनीहरूले हामीलाई पहिला नै चिनेको जसरी गफ दिए। तीन जना युवतीका लागि तीन वटा बियर र तीन वटै रेडबुल अर्डर गरियो। बियर तीतो हुने भएकाले रेड बुल हालेर खाँदा स्वाद आउने र फरक खालको ट्रिप दिने भन्दै उनीहरू बियर खान थाले।
कञ्चन थापामगरको नाममा पोखरा महानगरपालिकामा यो रेस्टुरेन्ट दर्ता छ। हामीसँग बसेर बियर खाइरहेका बेला रेस्टुरेन्ट सञ्चालक महिला कराउँदै आइन्। ‘के हो केटीहरू, कुना कुनामा बस्ने? केटा मान्छेसँग किन नजिक बसेको? अलि पर–पर बसेर खान सकिँदैन’ भनेर कराइन्। रेस्टुरेन्ट साहुनी कोठाबाहिर गएपछि युवतीहरू ‘गेस्टसँग सुत्न पठाउन चाहिँ हुने, अहिले कराउनुपर्ने’ भन्दै साहुनीलाई गाली गर्न थाले। ‘तपाईंहरू नयाँ देखेर नाटक गरेकी हो। अहिले मिलाएर बस्नुहोला भन्दै आउँछिन्’ भन्दै थिए उनीहरू।
उनीहरूले बियर खाइसक्दा नसक्दै रोजेकोसँग माथि जान अफर गरिरहेका थिए। ‘यस्तो मध्यदिनमा हामी त नबस्ने। डर हुन्छ। पुलिस आयो भने’ भन्दै टारिरहेका थियौँ। ‘पुलिसले केही गर्दैन,’ उनीहरू निर्धक्क भन्दै थिए, ‘हामीलाई कहिलेकाहीँ पक्रेर लान्छ। केही बेरमा छोडिदिन्छ। बेलुका हामीसँगै रोमान्स गर्न आउँछ पुलिस। त्यही भएर चिन्ता लिनुपर्दैन।’
होटलजस्तै व्यवस्थित चार वटा रुम भएको ए वानमा रातदिन यौनधन्दा हुन्छ। राति बस्ने व्यवस्थासमेत भएको युवतीहरूले बताए। ‘यहाँ बसे पनि हुन्छ,’ उनीहरू भन्दै थिए, ‘तपाईंहरू बसेको होटलमा बोलाए पनि हुन्छ। हामीले चिनेको होटलमा गए पनि हुन्छ। च्वाइस तपाईंहरूको।’ उनीहरू ए वानले दिने यौन सेवाबारे सविस्तार बताउँदै थिए। ‘यहाँ बस्यो भने दुई हजार हो,’ एक युवतीले भनिन्, ‘राति होटलमा हामीलाई बोलाउनेले कम्तीमा पनि १० हजार तिर्छन्। राम्रो होटलमा बसेर ब्रोकरमार्फत खोज्दा हाम्रो भाउ त दशौँ गुणा बढी हुन्छ।’ उनीहरूले आफ्नो रेट बताए। ‘यस्तो सीसीटीभी क्यामरा जडान गरेको ठाउँमा पनि कसैले सेक्स गर्छ?’ भन्ने हाम्रो प्रश्नमा एक युवतीले भनिन्, ‘यो क्यामरा तलका लागि मात्र हो। देखाउनका लागि माथि कोठामा केही हुँदैन।’
उनीहरू ‘बसौँ–बसौँ’ भनेर कर गरिरहेका थिए। ‘अर्को पटक आउँदा हामी यहाँ नहुन सक्छौँ’ भन्दै उनीहरूले तीन÷तीन महिनामा शहर फेर्ने गरेको बताए। काठमाडौँ, पोखरा, बुटबल, नेपालगञ्ज विभिन्न शहरमा कन्ट्याक्टमा जाने गरेको बताए। एकै ठाउँमा बस्दा पुरानै केटी रहिछ भनेर ग्राहक पनि घट्ने र आम्दानी पनि कम हुने भएकाले ठाउँ परिवर्तन गरी–गरी काम गर्ने गरेको उनीहरूले बताए। तीनमध्ये अलि मोटी खालकी केटी भन्दै थिइन्, ‘मलाई सेक्स फाप्छ। अनि, त यसरी मोटाएकी छु।’ उनीहरूले ग्राहकले बुक गरेर तीन÷चार दिनको प्याकेजमा बाहिर लाने गरेको पनि बताए। ‘हामी यहाँ मात्र बस्ने होइन, कसैले काठमाडौँ बोलायो भने उतै जान्छौँ। बुटवलबाट काम आयो भने त्यतै लाग्छौँ,’ उनीहरूले भने।
उनीहरूले बियर खाइसक्दा सोफामा सुतिरहेकी युवती पनि उठिन्। उनी पनि धन्दा गर्ने नै रहिछिन्। साहुनीलाई कसैले फोन गर्‍यो। उनले ती युवतीलाई होटलको नाम र ठेगाना दिएर धन्दाका लागि जान भनिन्। ‘यी दिदी पनि कता–कता पठाउँछिन्’ भन्दै उनी स्कुटी स्टार्ट गरेर यौनधन्दाका लागि बाहिर निस्किइन्। ‘स्कुटीवाली मन परेको भए ऊसँगै बसे हुन्छ। ऊ टिप लागेर बाहिर गएकी छे,’ बियर पिउँदै गरेका युवतीहरू भन्दै थिए। हामी अरू दुई जना साथी लिएर आउँछौँ भनेर ए वानबाट बाहिरियौँ।
निगरानी नं. ४
सम्पर्क व्यक्तिमार्फत भेटिन्छन् यौनकर्मी
यौनधन्दा हुने केही सेक्स प्वाइन्टको निगरानीपछि हामीले सम्पर्क व्यक्तिमार्फत यौनकर्मी भेट्नका लागि बिहीबार राति ११ बजेसम्म पोखराका विभिन्न चोक र गल्ली चहार्‍यौँ। ट्याक्सी चालकमार्फत यौनकर्मी भेट्न खोज्दा निकै समय लाग्यो। सुरुमा ट्याक्सी चालक आफूलाई यो विषयमा केही थाहा नभएको भन्दै पन्छिन्थे। एक जना ट्याक्सी चालकले ‘मेरो नाम लिनू’ भनेर एक जना महिलाको नम्बर दिए। फलानो दाइले नम्बर दिनुभएको भन्नेबित्तिकै ती महिलाले फोनमा भनिन्, ‘ए ल ल कुरा बुझेँ, एक घण्टापछि फोन गर्छु।’ तर, उनले फोन नगरेपछि हामीले पुनः ती महिलालाई फोन गर्‍यौँ। उनीहरूले केटीहरू व्यस्त भएकाले समय लाग्ने बताइन्।
बाग्लुङ बसपार्कको यौनधन्दा बन्द
उनले त्यति के भनेका थिए बहस सुरु भइहाल्यो। जिज्ञासा उनीतिरै सोझिए। ‘जति रोक्न खोजे पनि भित्रभित्र धन्दा भइरहेकै छ, बरु धन्दा गर्नेलाई परिचयपत्र दिएर व्यवस्थित बनाउने हो कि,’ उनले थप प्रस्ट्याए, ‘त्यही नाममा प्रहरीले दुःख दिएको छ। व्यवसाय गर्नेले पैसा पनि नकमाउने र सुरक्षित पनि नहुने अवस्था छ।’
मुख्यमन्त्रीले ‘बहस सुरु गरौँ, वैधता दिने÷नदिने बहसपछि टुंगो लगाऊँ’ भनेका थिए। तर, यौन व्यवसायलाई तुरुन्तै मान्यता दिनेझैँ गरी आलोचना सुरु भयो। यसपालि फेरि उनैको मन्त्री परिषद्का सदस्य उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले ‘इन्जोय जोन’ बनाउने भाषण गरेपछि अर्काे तरंग आएको छ।
तर, मन्त्री लम्सालले गाँजा, लागुपदार्थ, मदिरा सेवन गर्नेदेखि यौन गतिविधि गर्ने गरी इन्जोय जोन बनाउन नौ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएका थिए। अभिव्यक्ति उनले सच्याउनुको एउटै कारण हो, त्यसको सर्वत्र विरोध हुनु। गण्डकी प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको आन्तरिक पर्यटन वर्षबारे पर्यटन व्यवसायीसँगको छलफलमा मध्य वैशाखमा मन्त्री लम्सालले इन्जोय जोनको अवधारणा सार्वजनिक गरेका थिए।
पछि उनले एक मिडियालाई दिएको अन्तर्वार्तामा समेत इन्जोय जोनबारे बोलेका छन्। तर, मन्त्री लम्सालले ‘सम्पूर्ण’सँग भने, ‘त्यस्तो नचाहिने कुरा मैले बोल्छु? कानुनविपरीत कुरा गर्ने होइन, तर पर्यटकका लागि स्पेसल जोन चाहिँ बनाउने हो।’ मन्त्री लम्सालले पर्यटकका लागि स्पेसल जोन फेवातालकै नजिक पामे वा मट्टिखान वा अन्त कतै बनाइने जानकारी दिए। ‘ठाउँ हेरिरा’छौँ,’ उनले भने।
मन्त्रीको उक्त अवधारणा आउनसाथ लेखक सरस्वती प्रतीक्षाले ट्वीट गरिन्। यहाँको सांस्कृतिक र भौगोलिक सौन्दर्यमा रमाउन पर्यटक पोखरालाई चाहिने उनको भनाइ थियो। प्रतीक्षाले त एउटा आलेखै लेखेर खबरदारी गरेकी छन्, ‘पोखराजस्तो स्वच्छता र सौन्दर्यको पावनभूमिलाई गाँजा र रक्सीको तालमा शरीर किन्ने र बेच्नेहरूको यौनभूमि बनाउने लज्जास्पद काम नगरियोस्।’ पोखरा विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक शिव संकल्पले पनि यौन बजार पोखरामा बनाउन नहुने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। उनी भन्छन्, ‘अद्वितीय प्राकृतिक दृश्य, असाधारण जलवायु अनि अनुपम संस्कृतिको संगमस्थल पोखरामा कुत्सित अपसंस्कृति बन्नु हुँदैन।’
पोखराका पुराना पर्यटनकर्मी झलक थापा मर्यादित पर्यटनको वकालत गरिरहन्छन्। उनी पनि संस्कृति र प्रकृतिसँग रमाउने पर्यटक पोखरामा बोलाउनुपर्ने र उनीहरूलाई सुसंस्कारयुक्त सत्कार दिनुपर्ने विचार सधैँ व्यक्त गरिरहन्छन्। एक पटक आएको पर्यटक फेरिफेरि आइरहने बनाउनुपर्छ भन्ने उनको धारणा हो।
पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष चिरञ्जीवी पोखरेल कानुन विपरीतका गतिविधि हुनु हुँदैन भन्छन्। थाइल्यान्डको बेइज्जत भएजस्तो पोखराको बेइज्जत नहोस् भन्ने आफूहरूको चाहना रहेको उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘हामीसँग एड्भेन्चर छ, प्रकृति छ, संस्कृति छ। त्यही नै हो हाम्रो पर्यटन।’ विद्यार्थी नेतृ प्रवीणा अधिकारी त झन् झोक्किँदै सामाजिक सञ्जालमा लेख्छिन्, ‘सेक्स टुरिजम, इन्जोय जोन झन्झटिलो भो, सीधै मुम्बईमा लगेर बेच।’